သင့်ကလေးစိတ်ရောဂါ ခံစားနေရသည့် လက္ခဏာများ - Hello Sayarwon
Dr. Kaung Thar မှ ရေးသားသည်။ 15/10/2021 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ကလေးများသည် လူကြီးများကဲ့သို့ တူညီသောစိတ်ရောဂါများရရှိနိုင်သည်။ သို့သော် သူတို့၏ လက္ခဏာများအား မိဘများသတိထားမိရန် ခက်ခဲပါသည်။ ထို့ကြောင့် စိတ်ရောဂါခံစားနေရသည့် ကလေးများတွင် ထိရောက်သောကုသမှုမရရှိကြပါ။ မိဘများအနေနှင့် ကလေးများရှိစိတ်ရောဂါသတိပေးသည့် လက္ခဏာများကိုသိပြီး အချိန်မှီကျော်လွှားသင့်ပါသည်။
စိတ်ရောဂါရှိသည့် ကလေးများ၏ အမူအရာသည် တူညီသောရောဂါရှိသည့် လူကြီးနှင့် ကွဲပြားနိုင်သည်။ ဥပမာ- စိတ်ကျရောဂါရှိသည့် ကလေးသည် လူကြီးထက်ပို၍ စိတ်တိုလွယ်သည် ။ လူကြီးများတွင် ပို၍ဝမ်းနည်းနိုင်ပါသည်။
ကလေးများ ကြုံတွေ့ရသည့် အချို့သောစိတ်ရောဂါများ
စိုးရိမ်ပူပန်မှု– စိုးရိမ်စိတ်ရှိသည့် ကလေးများသည် ကြောက်ရွံမှု၊ စိုးရိမ်မှု၊ အာရုံရှုပ်ထွေးမှုစသည့် အခြေအနေများကို တုံြ့ပန်ကြပါသည်။
ဖျက်ဆီးလိုသောအပြုအမူများ– ဤရောဂါရှိသည့် ကလေးများသည် ကျောင်းစသည့် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် စည်းမျဉ်းများချိုးဖောက်ပြီး လူမှုဝန်းကျင်နှင့် ဆန့်ကျင်သည့် အပြုအမူများရှိနိုင်ပါသည်။
ပျံ့နှံ့သောတွေးများဖြစ်ပေါ်သည့် ပြဿနာများ– ကလေးသည် တွေးသည့်အခါ အာရုံရှုပ်ထွေးနေပြီးကမ္ဘာလောကကြီးကိုနားမလည်နိုင်သောအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည်။
စားသောက်ခြင်းပုံမမှန်သည့် ကလေးများတွင် အစာတစ်ခုစားရန်တွန်းအားပေးသည့်အခါ ပြင်းထန်သောစိတ်ခံစားမှုများစသည့် ပုံမမှန်သည့် အပြုအမူများရှိနိုင်သည်။
အတွေးများကိုသက်ရောက်သော ပြဿနာများ– ဤလက္ခဏာရှိသည့် ကလေးများသည် အချိန်အများစုတွင် ဝမ်းနည်းနေတတ်ပြီးသူတို့စိတ်အပြောင်းအလဲသည် အလွန်မြန်ပါသည်။
ပုံမှန် မဟုတ်သည့် သိမြင်နားလည်ခြင်းနှင့် အတွေးများနှင့် သက်ဆိုင်သော ဆိုးဝါးသည့် ရောဂါကိုschizophreniaဟုခေါ်သည်။ ဤရောဂါသည် ရုတ်တရက် အဓိပ္ပါယ်မဲ့သော လှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်သော ပြင်းထန်သည့် ကျန်းမာရေးတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကလေးများတွင်ဖြစ်တတ်သော စိတ်ရောဂါများ၏ သတိပေးသောလက္ခဏာများ
• စိတ်အပြောင်းအလဲဖြစ်ခြင်း။ ဆိုးဝါးသောနေ့တစ်နေ့တွင်သာမက နောက်အပတ်ပေါင်းများစွာကြာသည်အထိ ဝမ်းနည်းမှုခံစားချက်များကို ရှာဖွေနေသည်။ အိမ်(သို့) ကျောင်းတွင် ပြဿနာများဖြစ်သည်စေသည့် ပြင်းထန်သောစိတ်ပြောင်းလဲမှုများရှိသည်။ အပြုအမူပြောင်းလဲမှုများသည်လည်းကလေးများ၏စိတ်ရောဂါတွင် သတိပြုရမည့် လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့တွင် ပင်ကိုစရိုက် လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲမှုများ၊ တုံပြန်မှုတစ်ခု၊ ဥပမာခဏခဏရန်ဖြစ်ခြင်း(သို့) တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေလိုခြင်းစသည့် ပြောင်းလဲမှုတို့ဖြစ်သည်။
• လွယ်ကူစွာစိုးရိမ်တတ်ခြင်း။ စိုးရိမ်စိတ်ရှိသည့် ကလေးများတွင် အကြောင်းရင်းမရှိဘဲလွှမ်းမိုးခံရတတ်သည်။ မိဘများသည် ကလေးတစ်ယောက်၏ နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများကိုနှောင့်ယှက်နိုင်သည့် ပြင်းထန်သောစိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်သည့်အခါ နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊ အသက်ရှူမြန်ခြင်းတို့ကိုရှာဖွေပေးနိုင်သည်။
• အာရုံစူးစိုက်ရန် ခက်ခဲခြင်း။ ကလေးတစ်ယောက်သည် ကျောင်းတွင်ဆိုးဝါးသော အပြုအမူကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ အကြောင်းမှာသင်ခန်းစာများကိုအာရုံစူးစိုက်ခြင်း(သို့) စကားလုံးများကိုနားလည်ခြင်းတွင် အခက်အခဲများရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
• အကြောင်းရင်းမရှိဘဲ ပိန်ကျခြင်း။ ရုတ်တရက် ခံတွင်းပျက်ခြင်း၊ မကြာခဏအန်ခြင်း(သို့) ဝမ်းပျော့ဆေးများသုံးခြင်းသည် အစားအသောက် ပုံမမှန်ခြင်းကိုဖော်ပြနိုင်သည်။
• စိတ်ရောဂါရှိသည့် ကလေးများတွင် အချို့သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများရှိပါသည်။ အကြောင်းရင်းမရှိဘဲကိုယ်လေးချိန်ကျခြင်း(သို့) စားသောက်ခြင်း ပြဿနာများသည် သတိပေးလက္ခဏာများပင်ဖြစ်သည်။ စိတ်ရောဂါရှိသည့် ကလေးငယ်များ၏ တုံပြန်မှုသည် လူကြီးများနှင့် ကွာခြားပါသည်။ ကလေးများတွင် ဝမ်းနည်းမှု၊ စိုးရိမ်မှုတို့ထက် ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အစာအိမ်အောင့်ခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်သည်။ အချို့ ကလေးများတွင် တမင်သက်သက်သူတို့ ခန္ဓါကိုယ်ကိုထိခိုက်နိုင်သည်။ ၎င်းကို မိမိကိုယ်ကိုထိခိုက်စေခြင်းဟူခေါ်သည်။ သူတို့ဘာသာသူတို့ လှီးဖြတ်ခြင်း(သို့) မီးလောင်စေခြင်း(သို့) သတ်သေရန် အတွေးများရှိပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေချင်ကြသည်။
Mental illness in children : know the signs.
Accessed inMarch 8, 2017.
2. Mental illness in children.
http://www.webmd.com/anxiety-panic/mental- health-illness- in-children.
Accessed in March 8, 2017.
3.5signs your child hasamental-health issues.
http://www.todaysparent.com/blogs/on-our-minds/5-signs- your-child- has-a- mental-health- issue/. Accessed in March 8, 2017.
4. Mental illness in kids : The surprising warning signs.
http://www.everydayhealth.com/emotional-health/mental- illness-in- kids-surprising- warning-signs.aspx. Accessed in March 8, 2017.